Xildhibaan Sheegay In Aanay Jabuuti Marnaba Ogolayn Somaliland Walaacna Ka Muujiyey Sida Ay Dhex Ugu Noqon Karto Wada Hadalada Somaliland Iyo Soomaaliya | FooreNews
Home wararka Xildhibaan Sheegay In Aanay Jabuuti Marnaba Ogolayn Somaliland Walaacna Ka Muujiyey Sida Ay Dhex Ugu Noqon Karto Wada Hadalada Somaliland Iyo Soomaaliya
Xildhibaan Sheegay In Aanay Jabuuti Marnaba Ogolayn Somaliland Walaacna Ka Muujiyey Sida Ay Dhex Ugu Noqon Karto Wada Hadalada Somaliland Iyo Soomaaliya
Boorama, February 12, 2018 – (Foore)- Xildhibaan Abiibakar Cabdi Good oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Wakiillada Somaliland lagana soo doortay Gobolka Awdal ayaa waddanka Jabuuti ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ka noqon Karin arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya isaga oo sheegay in dawladda Jabuuti xaqiiqo ahaan ay mar walba u hiilinayso oo ay taageersan tahay waddanka Soomaaliya sidaa darteed uu ka xun yahay sababta dawladda Somaliland u aqbashay dhexdhexaadnimo ay arrinka qaddiyadda Somaliland ka noqoto waddan aan ku ogolayni.
Xildhibaan Abiibakar Cabdi Good waxa uu sheegay in qaddiyadda Somaliland ku taabbo galayso iyada oo dadka aqoonyahankeeda ahi isku yimaaddaan oo talo isla gaadhaan oo dalalka Jaarka ah laga bilaabo sidii looga dhaadhicin lahaa qaddiyadda balse dalka Jabuuti ee wada hadalku ka bilaabmayaa marnaba aanu ogolayn qaddiyadda Somaliland.
Xildhibaanka arrinkan ka sheegay shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay Magaalada Boorama waxaanu yidhi: “Waxa ay wax ku dhalayaan ama ay ka soo muuqan karaan midna maaha. Waayo, horta waxa in la is waydiiyo ah waddanka wada hadalka qabanaya ee aan tagayaa ma dhexdhexaadbaa?. Waxa wanaagsan meel aanay waxba ka dhalanayn in wakhti lagu lumiyo maaha. In nuxurka laga tago oo hadallo guud mar ah oo aanay waxba ka go’ayn oo aan ahayn halkii ubucdu taallay ee muhiimka ahayd la taabanayna waa khasaare iyo dhib in wakhtiga lagu lumiyana maaha. Ka midho dhalinta qaddiyadda Somaliland waxa muhiim ah in dalalka Jaarka horta laga dhaadhiciyo Jabuuti hadday noqoto, Itoobiya iyo Kenya. Hadal baa socda uun in la yidhaa hadal aanay waxba ka soo dhalayn. Dalka Jabuuti haddii aan soo qaato dadka labada dal waa dad isku ehel ah oo isku abti ah oo is dhalay balse ta siyaasadda gooni isutaagga Somaliland marnaba ma taageersana. Waxa ay taageersan tahay Soomaali weyn ayay taageersan tahay. Mana qarsato mawqifkeeda Ismaaciil Geellena nin qarsada mawqifkiisa maaha. Nin ka laba labeeyana maaha isagu waxa uu aaminsan yahay Soomaaliya”.
Dhinaca kale Xildhibaan Abiibakar Cabdi Good waxa uu aad u dhaliilay saamiga xukuumadda uu Muuse Biixi ka siiyey Gobolka Awdal waxaanu yidhi: “Sidan wax u socdaan aadbaa loola yaabban yahay oo umaddi way yaabban tahay”. Ayuu yidhi Xildhibaan Abaa Bakar Good oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Wakiiladu.
Previous PostSixirroole Adeegsan Jiray In Ka Badan 280 Jin Iyo Shadaadiin Ah Oo Toobbad Keenay Kana Warramay Qisooyinka Uu Samayn Jiray Ee Layaabka Badnaa Next PostMilicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi - Q:3aad